Ku Saabsan GIS | GIS
GIS (General Inspection Service Co., Ltd) waa injineer tayo sare leh iyo la tashiga maaraynta iyo shirkada adeega. Waxaa loo hibeeyay inay ka caawiso macaamiisha sidii loo abuuri lahaa loona horumarin lahaa xaqiijinta tayada iyo xakamaynta tayada isla markaana si hufan loogu caawiyo macaamiisha inay horumariyaan oo ay kormeeraan alaab-qeybiyeyaashooda. Waxaa kuqasbay Maamulka Guud ee Ilaalinta Tayada iyo karantiilinta PR China, GIS waxay siineysay adeegyo kormeer dhinac saddexaad, qiimeyn warshad iyo waliba maamulida tayada mashruuca, tijaabada badeecada iyo kormeerka iyo wadatashiga injineerka tayada ilaa 2005.
2005, GIS waxaa si wada jir ah u aasaasay Xarunta Hubinta Tayada ee Ururka Shiinaha ee Tayada tayada iyo Ururka Tayada Gobollada ee Fujian.
2009, GIS waxay ka heshay shahaadada ISO9001 Xarunta Qiimeynta Tayada ee Ururka Shiinaha ee Tayada.
2010, GIS waxay heshay Shahaadada Aqoonsi ee Hay'ada Kormeerka & Dhoofinta Badeecadaha iyo Sahaminta AQSIQ (Maamulka Guud ee Kormeerka Tayada pe Kormeerka iyo karantiilinta PRC).
2012, GIS waxay yeelatay xubinimada Baarayaasha Ka-bixida Gelitaanka Shiinaha iyo karantiilnimada waxaana loo doortay inuu noqdo maareeyaha maareeyaha hay'adda kormeerka soo dejinta iyo dhoofinta iyo laanta Daraasadda ee Ururka.
2013, GIS waxay ka heshay shahaadada CNAS-C101 (ISO / IEC 17020) oo ka timid Shahaadada Qaranka ee Shiinaha.
Sanadkii 2015 ， GIS waxaa aqoonsi kahelay Kormeerka Fujian iyo Is karantiilida oo ah isuduwaha ganacsiga Fujian ee xorta ah deegaanka Fuzhou Pingtan (alaabada la soo dhoofiyo).
2016, GIS waxaa loo ansixiyay sidii degmada Fujian ee madal loogu adeego bulshada loogu talagalay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah,
GIS wuxuu leeyahay 12 xafiis oo ku yaal Shiinaha oo dhan. Xafiiska guud wuxuu ku yaal Fuzhou, Fujian. 11ka xafiis ee kale waxay ku yaalaan Shunde, Dongguan, Shenzhen, Xiamen, Ningbo, Hangzhou, Suzhou, Qingdao, Tianjin, Jinan iyo Zhengzhou. Erey ahaan, waxaan ka dhignay shabakadda adeegga kormeerka ee Shiinaha. Ilaa hadda, GIS waxay leedahay gebi ahaanba in ka badan 100 shaqaale si ay ugu adeegaan macaamiisha. La taliyayaasheena maareynta tayada, hantidhawrka dhirta, kormeerayaasha badeecada, injineerada soosaarka alaabta iyo injineero tayo leh ayaa dhamaantood ah injineero karti leh. Tiro ka mid ah dhoofinta sare ee warshadaha kala duwan ayaa sidoo kale ku hawlan GIS. Sanado dadaal kadib, GIS wuxuu ku dadaalayaa inuu noqdo mid ka mid ah shirkadaha ugu tartan iyo saamaynta badan warshadahaan Shiinaha.
Ka caawi macaamiisha in ay dhisaan ama ay horumariyaan nidaamka xakamaynta tayada, u ogaadaan dhibaatooyinka ka jira badeecada isla markaana bixi xalka xirfadleyda ah si loo yareeyo khatarta helitaanka badeecada cilladaysan isla markaana loo yareeyo waxyeelada macaamiisha sababtoo ah alaabada liidata.
Ka caawi macaamiisha inay horumariyaan oo ay kormeeraan alaab-qeybiyeyaasha. Bixinta xirfadleyda waxay ku talineysaa inay horumariso awoodda wax soo saareyaasha alaab-qeybiyeyaasha iyo hubinta tayada iyo awoodda kontaroolada, kor loogu qaado koritaanka alaabada iyo macaamiisha shirkada.
Bixi kormeerka xirfadlaha seddexaad, qiimeynta dhirta, maaraynta tayada mashruuca, kormeerka badeecada iyo tijaabada iyo adeegga latalinta injineerinka tayada iyo latalinta khilaafaadka ISO 9001, ISO 14001, ISO / TSI 16949, SA8000, QS9000, OHSAS18000, HACCP, GMP, Ilaalinta hantida caqliga. halbeegyada warshadaha kala duwan.
Nidaamka maamul ee tosta-ubeynta iyo nidaamka qiimeynta madal ganacsiga, naqshadeynta soosaaraha iyo qiimeynta shirkadda ganacsiga, kormeerka wax soo saarka, maamulka mashruuca e-meheradda ganacsiga iyo tafaariiqda internetka.
Falsafadeena ganacsi: Macaamiisha, Shaqaalaha, Horumarinta.
Waa waajibaadkeena inaan si joogto ah u hagaajino tayada adeegyadeena si aan uga dhigno macaamiisheenna qanacsanaanta GIS waxay diiradda saareysaa koritaanka shaqaalahayaga. Waxaan ku dadaalaynaa sida ugu wanaagsan inaan fursad siino shaqaalaheena. Sidan, waxaan kula horumarin karnaa macaamiisheenna wadajir.
Ixtiraam himilooyinka shaqada; Ku raaxayso raaxada nolosha.
Tayada ayaa go'aamisa qiimaha; masuuliyada ayaa go’aamisa shaqsiyada
Lasoco awooda xoogan ee lagu ogaanayo shuruudaha macaamiisha; Haysato hal-abuurka, awooda fulinta iyo awooda taageerida xalinta barnaamijyada macaamiisha.
Hadafka Shirkadda ：
Guul aamin iyo ixtiraam ka hel macaamiisha oo dhan
Full Online Kormeerka , In Hab-baadhista , Saddexaad xisbiga Inspection , Loading Weelka Kormeerka , Xarafka Production Check , Qiimaynta Factory ,